ဤသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ခေါင်းမာဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အနံ့ဖုံးကွယ်ထားကြောင်းဘို့ပြီးပြည့်စုံသောထိုခံစားချက်ရုတ်သိမ်းပေးရန်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ပင်ပန်း နေ့မှစ. စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရာနိုငျသောချစ်စရာကောင်းတဲ့အမွှေးအကြိုင်, ကြီးမြတ်ခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာည '' အိပ်စက်ခြင်းဟာမွှေးကြိုင်မွှေးအကြိုင်တို့ကဝိုင်းရံလာနှင့်အတူအာကာသဖြည်။
Cool မြူခိုး Humidifier သင့်ရဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာအဆင်ပြေနှင့်ဖြေလျော့ပေးခြင်းပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးပေးပါတယ်။ ultra-တိတ်ဆိတ် humidifier သင့်ရဲ့အခန်းကိုစနစ်တကျ moisturized စောင့်ရှောက်။ အထူးသဖြင့်တစ်ဦးလေအေးပေးစက်အခန်းထဲမှာ။
♦ 1 00ml
♦ခြောက်သွေ့တဲ့ဆောင်းလထဲမှာခြောက်သွေ့ CHAP အသားအရေကာကွယ်ပါ။
ဤသည်ကို USB အနံ့ပျံ့သောကြောင့်သို့စားသုံးဆီများအများအပြားပေါက်ပေါင်းထည့်ခြင်း, ကချစ်စရာကောင်းတဲ့အမွှေးအကြိုင်နှင့်သင်၏အာကာသဖြည့်ပါလိမ့်မယ်။ baby.It, သင့်အိပ်ပျော်ခြင်းတိုးတက်စေသင့်ရဲ့အသားအရေအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနဲ့ပိုပြီးနိုငျသောကွောငျ့သငျသညျမြားကိုလညျးကိုက်ညီ like.It လျှင်သင်တို့သည်လည်းတစ်ဦး humidifier အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။
DC က 24V, 15.6W
2000 သတ်မှတ်မည် / သတ်မှတ်ပေးသည်
ကို ABS + PP (AntiCorrosion)
စက္ဏူထူနှုန်း 24 PCs; CTN: 45.5x37x41cm
1x Adapter ကို
1 ။ ထို့နောက်တစ်ဦးပြားချပ်ချပ်နဲ့ Hard မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ယူနစ်ထားထုတ်ကုန်များ၏ပေါက်သို့ adapter ထားပါ။
2 ။ အဖုံးကိုဖယ်ရှားမည်, ခွက်ကိုတိုင်းတာခြင်းအတွက်ရေတိုင်ကီထဲသို့ရေကိုလောင်း။ အဆိုပါ max ကိုရေအဆင့်ကိုသတိပြုမိနှင့်ပဲ 2-3 မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီယိုပေးပါ။
3 ။ ထိပ်ဖုံးကိုပိတ်လိုက်ပါ။
4 ။ အတွက် Plug နှင့်ပေါ်တွင်ယူနစ်လှည့်။
သင်ဤမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ Humidifier အကြောင်းပိုမိုဂရုစိုက်စေခြင်းငှါ
1 ။ အလင်းကိုပိတ်ထားခံရနိုင်သလား?
မှန်ပါသည်, အလင်းကိုပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အလင်းသည်အလိုအလျှောက်အဆင်းအရောင်ကိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်သို့မဟုတ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်မယ့်အရောင်ရောက်ရှိသောအခါသင် button ကိုနှိပ်နိုင်ပါတယ်ကြောင့်သာအရောင်ပေါ်နေဖို့ပါလိမ့်မယ်။ အရောင်မျိုးစုံငါမျှော်လင့်ခဲ့ကြခြင်းထက်အများကြီးပိုခဲ့ပါတယ်။
2 ။ အလိုအလျောက်ပိတ်ထားသလား